Indonesia in Focus: Muhiimadda salaadda.
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (337)
(Qaybta saddex boqol iyo soddon iyo toddoba), Depok, West Java, Indonesia, August 8, 2015, 1:58 pm).
Salaaddu waa labaad ee ugu muhiimsan ka mid ah tiirarka Islaamka, ka dib markii aqoonsi ee u dhac ah oo Ilaah, Laillahaillaulah (Ilaah kale ma jiro oo ay tahay in la caabudo Eebe mooyee), la baryona in Ilaah kaasaa badbaadi doona ay ka mid yihiin kooxda oo ay tagaan samada ka. Maxaa yeelay, haddii aynu nahay dhintay (dhintay) oo ahaa kii ugu horeeyay ee xisaabtu (lagula xisaabtamo) by Ilaah on Maalinta Qiyaame (sarakicidda / Aakhiro) wuxuu ku saabsan yahay salaadda, haddii salaadda waa wanaagsan yahay, ka dibna wanaagsan ayaa sidoo kale ku dhaqmaan kale.
Jagooyinka salaadda In Islam
Waxaa jira shan salaadda ee qasabka: duhurkii, 'Casar, Maghrib,' Isha 'iyo Fajr.
Laga soo bilaabo Anas ibn Maalik Radi anhu, ayuu yiri, "Habeenkii ee Isra '(marka Nabiga sallallaahu' wa la sara kiciyey samada) waxaa looga baahan yahay in ay Nabiga sallallaahu 'wa baryayaa konton jeer. Markaas dhimay ilaa shan jeer. Markaasuu u yeedhay baxay, 'Nabiyow, go'aanka dhabta ila gees ah aan la beddeli karin. Oo weliba sida runta ah aad (Ajirka) shan waa sida (ajir) iyo konton '. "
Of Talha bin 'Ubaidullah Radi anhu, waxa uu inoo sheegayaa in mar timo straggly Baadiyaha Carabta Nabiga sallallaahu yimid' wa oo wuxuu ku yidhi, "Rasuulkii Eebe, ha i baryayaa waxa Ilaah ii baahan yahay ee." Waxa uu ku jawaabay:
"Salaadda shan jeer maalintii, haddii aad rabto in aad wax ku dartid (salaadda sunnada)." 
Laga soo bilaabo 'Abdullah bin Cumar Radi anhu, waxa uu sheegay in Nabiga sallallaahu' wa yiri:
"Islam shantii (xaaladaha) waxaa dhisay: maragga in uu jiro Eebe waa kan ku diibadahi midig laakiin Eebe iyo Muxammad waa Rasuulkii Eebe, Ooga Salaadda lahayn, soo saaray sadaqo, Xajka Baydka, iyo soon Ramadaan." 
A. qof Legal oo sameeyey Salah
Oo dhan Islamic Ummah isku raacay in kuwa beeniya loo baahan yahay ee salaadda, sidaasi darteed waxa uu yahay gaal iyo Islaam. Laakiin ay isku Khilaafeen ku saabsan dadka weli aaminsan in ka tago Salaadda la waajibaadkeeda sharciga ah. Sababta oo ah in khilaafka uu yahay jiritaanka tiro ka mid ah xadiiska Nabiga sallallaahu 'wa baryaya dadka ka tagay salaadda sida quruumaha kale, oo aan kala Kuwa Beeniyey iyo caajis loo sameeyo.
Laga soo bilaabo Jabir Radi anhu, waxa uu sheegay in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Sida xaqiiqada ah (xadka) dhexeeya shirk iyo qof kufr la Salaadda la tagay." 
Laga soo bilaabo Buraidah, ayuu yiri, "Waxaan maqlay nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Heshiiska ayaa innaga iyo iyaga waa salaadda. Ruuxii ka Baxa, ka dibna isagoo Gaal ah. '"
Laakiin rajih oo ka mid ah fikradaha culimada ', in halkan kufr kufr aan la soo bixiyey diinta yar. Tani waa natiijada tanaasul u dhexeeya xadiis qaar ka mid ah caadooyinka kale, ay ka mid yihiin:
Laga soo bilaabo 'bin Ubadah ash-Saamit Radi anhu, ayuu yiri, "Waxaan maqlay nabiga sallallaahu' wa yiri:
خمس صلوات كتبهن الله على العباد, من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة, ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
"Shan salaadda Eebe addoommada waxaa looga baahan yahay. Ruuxii saas yeela oo ku dhumin wax la xiriira sababo sahlan u yara, ka dibna waxa uu leeyahay de-leh heshiis Ilaah u geli jannada. Oo ku alla kii ma aadan samayn, markaas asaga aysan heysan axdi ula Ilaah. Hadduu doono, ka dibna uu mengadzabnya. Ama hadduu doono, wuxuuna u dambi dhaafi. '"
Waxaannu ku tirinnaa in sharciga tagay Salaadda weli ka hooseeyo heerka uu kufr oo shirk. Maxaa yeelay Nabiga sallallaahu 'wa ma soo gudbiyaan kiisaska dadka sameeyo doonistii Ilaah.
Iyadoo Alle Subhanahu wa imtithaal:
"Dhab ahaan yaa Eebe ma dembiga shirk ka cafiyi doonaa, oo uu kala cafiya dembiyadaada oo dhan ka (shirk), u fidiyaa cidduu doono. . Ruuxii Eebe, Eebe wuxuu leeyahay dembi weyn "[An-Nisa ': 48]
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah Radi anhu, ayuu yiri ", waxaan maqlay Nabiga sallallaahu 'wa yiri,' Bal eeg markii ugu horeysay u keenay warsan ka addoon Muslimiinta on Maalinta Qiyaame waa Salaadda ee qasabka ah. Haddii uu sidaas u yeelaan inay si kaamil ah (uu ka badbaaday). Haddii aan, Markaas waxaad ku tidhaahdaa, Bal eega, haddii waxa uu leeyahay salaadda sunnada ah? Haddii uu leeyahay sunnada salaadda waa qasab inuu ku tukado sunna ayaa waxaa lagu safeeyey salaadda. Markaas dhaqanka oo dhan salaadda ee qasabka ah waxaa loo keenay in lagu xisaabiyo iyo sidoo kale. '"
Laga soo bilaabo Hudhayfah ibn al-ÒNebiga, waxa uu sheegay in Nabiga sallallaahu 'wa yiri, "Islam agtiinna doonaa sida ka lumay ee midabka ah ee dharka ay yaraatay. Ilaa haatan ma aha waxa loo yaqaanaa soon waxa, salaadda, allabaryo, iyo Sadaqah. Quraanku waa la sarraysiin doonaa in hal habeen, ilaa aan la tagay Aayaddan oo keliya oo dhulka ku. Joog fasalka ee dad ah oo ka mid ah dadka waayeelka ah iyo tabar. Oo waxay ku yidhaahdeen, 'Waxaan ka heli Aabayaalkanno hadlay erayada:. La ilaha illallaah oo aan odhan' "Shilah wuxuu isagii ku yidhi," Ma aan ilaaha iyo xulafadeeda ay weedha illallaah waxba tarin iyaga, haddii aadan aqoon waxa ay tahay salaadda, soonka, allabaryo, iyo Sadaqah? "
Markaas Hudhayfah jeedsadeen. Shilah soo noqnoqda su'aasha saddex jeer. Mar kasta waxaa sidoo kale waa Hudhayfah jeedsadeen. On markii saddexaad, Hudhayfah jeestay oo ku yidhi, "shilah O, xukun u badbaadin doonaa iyaga ka cadaabta. Oo isna wuxuu u soo noqnoqda saddex jeer. "
B. Yaa loo baahan yahay?
Salah wuxuu ahaa khasab walba oo Muslim ah kuwaas oo uu leeyahay baligh oo macquul ah
Laga soo bilaabo 'Ali Radi anhu, ka Nabiga sallallaahu' wa, ayuu yidhi:
"Pena (rikoorrada Zakada) waxaa kor saddex qof:. Ka mid ah kuwa seexan ilaa tooso, ka carruurta si baligh, iyo waali si ay u soo laabtaan miyir" 
Waajibka ah waalidiinta in ay carruurtooda u diraan si ay u tukadaan salaadda, inkastoo aan la loo baahan yahay, in ay tahay in la yaqaan salaadda uu.
Laga soo bilaabo Camar ibn Shucayb, ka aabbihiis, oo uu awoowe, waxa uu sheegay in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
Carruurtaada "fartaa inuu ku tukado da'da toddoba sannadood. Oo waxaad iyaga ku garaacday u inuu ka tago kooxda ee da'da toban sano. Sidoo kale iyagoo sariirahooda jiifa oo kala duwan. "
Jabir bin 'Abdillah Radi anhu, in Nabiga sallallaahu' wa Alaihissallam Gabriel soo booqday oo markaas ku yidhi Nabiga sallallaahu 'wa, "Kaca oo tukada!" Salaadda Markaasuu Zhuhur markii qorraxdii ayaa sibxaday. Markaas Gabriel waxaa isaga u yimid mar kale marka 'Casar oo wuxuu ku yidhi, "Kac oo u bari!" Markaas Nabiga sallallaahu' wa tukadaan 'Casar markii hooskii oo dhan oo dhererkeedu wuxuu la mid ah sida wax asalka. Markaas Gabriel waxaa isaga u yimid mar kale Maghrib, oo ku yidhi, "Kac oo soo duceeya." Markaas Nabiga sallallaahu 'wa ku tukaday Maghrib markii qorraxdii dhacday. Markaas Gabriel yimid 'Isha' oo wuxuu ku yidhi, "Kac oo u bari!" Markaasuu ku baryayaaye 'Isha' markii ahayd gabbaldhac oo casaan ayaa la waayay. Markaas Gabriel waxaa isaga u yimid mar kale marka Shubuh oo wuxuu ku yidhi, "Kac oo u bari!" Markaas Nabiga sallallaahu 'wa Shubuh markii ay soo muuqatay Salaadda Subax, ama Jabir yiri, "Markii waagu."
Maalinta ku xigta Gabriel ku soo laabtay Nabiga sallallaahu 'wa marka Zhuhur oo wuxuu ku yidhi, "Kac oo u bari!" Markaas salaadda uu Zhuhur markii hooskii oo dhan oo dhererkeedu wuxuu la mid ah sida wax asalka. Markaasay soo kacday, isaga, markuu ka 'Casar oo wuxuu ku yidhi, "Kac oo u bari!" Markaasuu ku baryayaaye' Casar markii Hoos dheer oo alaab ah oo dhan labo jeer ay dhererka asalka ah. Kolkaasay ku tidhi isagii u yimid markii Maghrib waqti isku mid shalay iyo ma bedeli ma. Markaas at 'Isha "ayuu u yimid, kolkii habeenkii ayaa maray bartamihii ama Jibriil ayaa sheegay in habeenkii saddexaad, - ka dibna uu ku baryayaaye' Isha '. Markaas Gabriel u yimid Nabiga sallallaahu 'wa markii maanta uu yahay mid aad u dhalaalaya, oo ku yidhi, "Kac oo u bari!" Markaasuu ku baryayaaye Shubuh markaas ayuu yiri,' In wakhtiga u dhexeeya labada waa markii si ay u tukadaan. '"
At-Tirmidi ayaa sheegay in Muxammad (ie Ibn Ismaaciil al-Bukhaari) ayaa sheegay, "Taariikhda ugu dhab ah ee ka dambeeya waqtiga salaadda waa Xadiiska Jabir."
Waqtiga cagtaydu Qorraxda hadhkiisa oo dhan oo dhererkeedu wuxuu la mid ah sida wax asalka.
Waqtiga markii hooska wax walba simanyihiin oo dherer ah ee asal ahaanta ilaa qorrax dhaca.
Waqtiga qorrax dhaca in khasaaraha ka mid ah midabka guduudan ee fiidka.
Iyada oo ku saleysan erayadii Nabiga sallallaahu 'wa: ". Waxa la gaaray xilligii Salaadda Maqribka guduudasho midabka fiidkii aan ku maqnaayeen" 
Waqtiga khasaaraha ka mid ah fiidkii cas ilaa bartamihii fiidkii.
Iyada oo ku saleysan erayadii Nabiga sallallaahu a'alaihi Sallam wa sida tan: "Marka tukanayeen 'Isha' ilaa bartamihii habeen-."
5. Fajr ayaa
Markii ugu baxa ilaa qorrax ka soo baxa.
"Waqtiga Salaadda Subax ka Shubuh ka hor qorrax soo bax." 
A. Waa maxay ash-Salah al-Wustha (bartamaha)?
Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
"Ka dhig oo dhan Salaadda (mu), iyo (ilaaliye) salaadda Wusthaa. Istaag, waayo, Ilaah (tukashooyinkiinna) si Khashuue ah [Al-Baqarah: 238] '.'.
Laga soo bilaabo 'Ali Radi anhu, waxa uu sheegay in maalinta Battle of al-Ahzab Nabiga sallallaahu' wa yiri:
"Waxay na shuqliyay oy al-Wustha (ie) tukadaan 'Casar. Eebe waa laga yaabaa in guryaha iyo Qubuuraha iyagoo dab." 
B. disunnahkan Horumarinta Salah Zhuhur ee Time Start Marka maalinta aan aad u kulul.
Jabir bin Samurah, ayuu yidhi:
"Marka Nabiga sallallaahu 'wa salaadda Zhuhur markii qorraxdii ayaa sibxaday (tiirsan galbeed)." 
C. Haddii cimilada uu yahay mid aad u kulul, salaadda daahiyaan disunnahkan ilaa duhurkii, cimiladu yara Qabow (In ka badan ma Out of Time-Ed.)
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah Radi anhu, Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Haddii maalin aad u kulul, waxaa aan ku tukanayeen in cimilada noqday halkii qabow. Sida runta ah aad u kulul waa qayb ka mid ah gu'inta karisaa." 
D. disunnahkan deg degi Salah 'Casar
Laga soo bilaabo Anas Radi anhu:
J أن رسول الله كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية, فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة.
"Taasi Nabiga sallallaahu 'wa marnaba tukadaan' Casar, inta qorraxdu weli waa heer sare ah oo dhalaalaya. Markaas qof tegey, oo wuxuu soo booqday al-'Awali (meel geeska ah ee Madiina) inta qorraxdu weli waa heer sare ah." 
E. Ugoyn dembiga Dadka Salah 'Casar.
Laga soo bilaabo Ibn Cumar Radi anhuma, Nabiga sallallaahu 'wa yiri, "Dadka u boodboodaan baryo' Casar sida qoys oo hoos iyo hantida."
Laga soo bilaabo Buraidah Radi anhu, Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Ruuxii ka Baxa tukadaan 'Casar, markaas camal terhapuslah." 
F. Sin Mengakhirkannya Dadka Sidii fiidkii Ilaa (oo markii qorraxdu soo dhigay doonaa)
Laga soo bilaabo Anas Radi anhu ayuu yiri, "Waxaan maqlay nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Taasi waa Munaafiqiinta salaadda. Waxa uu ku fadhiistay daawashada qorraxda. Ilaa markii qorraxdu soo baxdo waa u dhexeeya labada gees Shaydaanka (baxna iyo meel qorrax ka) ​​ayuu kacay, oo Ilaah u barya afar rak'ahs si deg deg ah. Isagu ma Mana xusaan Eebe wax yar ah. "
G. disunnahkan deg degi Salah Maghrib iyo Dimakruhkan Mengakhirkannya
Laga soo bilaabo 'Uqbah bin' Amir Radi anhu, Nabiga nabad iyo a'alaihi Sallam wa yiri:
"My bulshada had iyo jeer waa in wax wanaagsan ama ku jira xaalad ah iyaga oo aan ku dhamaan fithrah ah intii lagu jiray salaadda Maghrib tan iyo jeeray xiddiguhu badan ka muuqan." 
Laga soo bilaabo Salamah ibn al-Akwa 'Radi anhu: "Waagii hore Nabiga sallallaahu'. Wa ku tukaday Maghrib markii qorraxdii dhacday oo dhuumatay waxa daaha ka (ma muujiyey)" 
H. afjaro disunnahkan ah salaadda "Isha" In ka badan ma cusla
Of 'Aisha Radi anhuma, isna wuxuu ku yidhi, "Habeenkii Nabiga sallallaahu' wa la joojiyo salaadda ah" Isha ', waxay noqotay, inta badan habeenkii iyo deggan masjidka waxa ay ahaayeen ku hurda. Markaasuu haddana u yimid oo ku baryayaaye, markaas ayuu yiri, 'Sida xaqiiqada ay tahay markii ugu, kaliya ma aanan dooneynin in rar dadkayga. 
I. Hurdada Dimakruhkan Sheekeysiga Previous iyo Later Ma fiicna.
From Abu Barzah Radi anhu: ". Nebigu sallallaahu 'wa hurdo nacayb hor' Isha 'iyo hadalka ka dib" 
Laga soo bilaabo Anas Radi anhu, ayuu yidhi, "Mid ka mid ah habeenkii waxaan sugayay Nabiga sallallaahu 'wa ilaa saqda dhexe ee habeenkii ah. Markaas uu yimaado oo uu ku baryayaaye, na raaco, markaasaannu talin. Waxa uu yiri:
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا, وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
Ogaada, sida runta ah dadkii ku leeyihiin salaadda ka dibna sariirta. Dhab ahaan aad ku sii salaadda inta aad sugayso Salaadda. '"
J. disunnahkan deg degi Fajr salaadda ee Waqtiga Hore (Marka weli gudcur)
Of 'Aisha Radi anhuma, isna wuxuu ku yidhi, "Waagii hore dumarkii oo ka qayb mukminat Salaadda Fajr wada Nabiga sallallaahu' wa iyagoo dhar ku duudduuban. Markaas ay guryahooda ku noqdaan marka ay dhameystirtay Salaadda. Ma jiro qof u muuqdeen in ay u aqoonsan yahay gudcurka. "
K. marka qof ay wali loo arko wakhti si salaadda?
"Waxa uu helay mid ka mid Cumputer-salaadda Shubuh ka hor qorrax soo bax, ka dibna ku baryayaaye, waxa uu helay Shubuh. Oo ku alla kii helay mid ka mid Cumputer-salaadda 'Casar ka hor dhicidda, waxa uu helay ku tukanayeen' Casar." 
Sharcigani ma aha in Salaadda Shubuh takhasusay iyo 'Casar, laakiin salaada oo dhan.
"Waxa uu helay mid ka mid Cumputer-salaadda, markaas baryayaa inuu soo helo" 
L. ka samaysan salaadood geftay
Anhu Radhiyiallahu Anas, waxa uu sheegay in Rasuulka Alle sallallaahu 'wa yiri:
"Qof kasta oo halmaamay ama la seexday on salaadda isaga ka, ka dibna kaffarat (madax furasho) waxaa lagu tukaday in haddii uu markii maanka." 
M.Apakah Dadka salaadda Iyada oo ula kac ah Left Out of Time Ilaa Waajibka ah Si aad noocan oo kale ah Salah?
Ibn Hazm rahimahullah ayaa sheegay in al-Muhallaa (II / 235), "Runtii, imtithaal ayaa waqti cayiman, iyo bilowgii iyo dhammaadka, Salaadda kasta ee qasabka ah. Waqti cayiman iyo ka bixitaanka waqti cayiman Entry. Waxaa jira farqi u dhaxeeya dadka ku tukadaan, kuwa Dhicis markii salaadda ka dib. Sababtoo ah labada Intaa waxaa dheer in waqtiga salaadda yihiin. Qadha waxaa waajib ku ah diinta. Inkasta oo diinta waa in aanay noqon marka laga reebo xagga Ilaah Rasuulladiisa afka ah. Haddii qadha khasab ah kuwa ula kac ah ka tago Salaadda ilaa waqtiga ka bixista, kadibna Eebe iyo Rasuulkiisa ma dayaca iyo iloobin ku saabsan. Mana si ula kac ah aad u adag oo aan la siiyo sharaxaad ku saabsan. "Oo ha illoobin Eebahaa." (Maryam: 64). Iyo mid kasta oo Shareecada ka fogna ma aha al-Quraanka iyo Sunnaha waa been. "
Posted by needsjobslowongankerja at 11:36 AM